Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Jet Super Hornet Fighter Jet yaphazamiseka eCalifornia Desert
uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inqwelo moya yengozi
Indawo: IPaki yeSizwe yokuFa. Inqwelomoya: Umkhosi waselwandle wase-US F / A-18F Super Hornet jet. Isiganeko: Saphahlazeka kwindawo esemazantsi entlango.
Umkhosi wamanzi uqeqeshe abaqhubi beenqwelo moya kwiPark Valley National Park ukusukela ngeminyaka yee-1930.
Oku kuqhekeka kwenqwelomoya yomlo kwenzeka ngentsimbi yesi-3 emva kwemini ngo-Okthobha u-4 kwaye ikwiqela lovavanyo lomoya kunye novavanyo lweqela (VX) 9.
Uhlobo olufanayo lwenqwelomoya-i-J / F-A-18F jet-yatshayisa e-Death Valley ngo-2019 kwindawo ebizwa ngokuba yi-Star Wars Canyon.
Eli lixesha lesibini indiza yomkhosi waselwandle wase-US iye yaphazamiseka kwiDeath Valley National Park kule minyaka mithathu idlulileyo. Ngokwesiqhelo iinqwelomoya zoqeqesho lwasemkhosini azivumelekanga kwiipaki zikazwelonke, nangona kunjalo, eli candelo laseDeath Valley apho kwenzeke khona ingozi eyenzekileyo kutshanje lalichongwe njengendawo yabo xa iCongress yongeza indawo epakini kwiminyaka engama-3 eyadlulayo. Umkhosi wamanzi uqeqeshe abaqhubi beenqwelo moya apha ukusukela ngeminyaka yee-27.
Ingozi yenqwelomoya yomlwelwe yenzeke malunga nentsimbi yesi-3 emva kwemini nge-4 ka-Okthobha kwaye ibikwiqela loVavanyo loMoya kunye noVavanyo (VX) 9. Ngethamsanqa, umqhubi wenqwelomoya wakwazi ukukhupha ngempumelelo wanyangwa ukwenzakala okuncinci esibhedlele eLas Vegas kwaye kukhutshwa.
Kwi-2019, inqwelomoya efanayo, i-F / A-18F Super Hornet, yaphahlazeka eRainbow Canyon, ekwabizwa ngokuba yiStar Wars Canyon, kwindawo esentshona yepaki eyaziwa ngokuba yiBawo Crowly Vista Point. Ngelishwa, le ngozi yabulala uLt.Charles Z. Walker kwaye yabangela ukonzakala kubantu ababebukele.
Iindonga ze-Star Wars Canyon zenziwe nge-metamorphosed Paleozoic limestone kunye nelinye ilitye le-pyroclastic. Olu dibaniso lwamatye lwenze iindonga ezibomvu, ngwevu, kunye nepinki ezifanayo kunye neplanethi yeStar Wars iTatooine, yiyo loo nto igama lesidlaliso.
Yindawo eyaziwayo yokubona iinqwelomoya ukuba zithathe iinqwelomoya zaseMelika ezenza uqeqesho lokubhabha oluphantsi njengoko zibhabha kwimikhosi emxinwa yeDeath Valley. Akukho ziindwendwe zepaki ezonzakeleyo apho ingozi yenzeke kufutshane nesikhululo seNqanawa yezixhobo zomoya iChina Ichibi, emida epakini kumazantsi mpuma.
Iijethi zokulwa Isantya esidlula kwi-canyon nge-200 ukuya kwi-300 mph kwaye xa zibhabha zisezantsi kangangeenyawo ezingama-200 ngaphezulu komgangatho we-canyon, zisengamakhulu ambalwa nje kuphela ezinyawo ababukeleyo. Abakhangeli beenqwelo moya basondele kwiiplanethi kangangokuba bahlala bebona ubuso babaqhubi beenqwelomoya, abanyanzelekileyo ukuba banike izijekulo imiqondiso kubalindi.